नेपाली निबन्ध – हुक्का | साहित्य संगालो २०१३
नेपाली निबन्ध – हुक्का
Posted on May 31, 2015 by भण्डारी2013
सात कोस परै भाग्थेँ म धूवाँदेखि।धूवाँसँग एउटा अत्यास र विध्वंसको नातो छ जस्तो लागिरहन्छ मलाई। यो समाप्ति र निमिट्यान्नको इतिहासले भरएिको ठान्छु म। धूवाँ एउटा रित्तिएर अनि सिद्धिएर आएको भाव मान्छु म। खरानी र धूवाँ आपसका नातागोता। हो, यी एकदमै नातेदार। बहुल अर्थमा यिनको परस्पर सम्बन्ध छ। अन्तिम तर्क र सिद्धान्तले यी हाम्रो वरपर उच्चारति भएका हुन्छन् हरक्षण। मैले धूवाँको संसारमा आफूलाई घचेट्ने प्रयास नगरेको पनि होइन। गाउँमा गोठालो जाँदा दाँवलहरू सिकाउँथे, धूवाँ तान्न। कोसिस पनि गरेकै हुँ तर असफल पूरै। हरेकपटक पराजित। अनिच्छा र हारको दुई पाइलामा दगुररिहेँ म। तराईमा जुटको सन्ठी सल्काएर तानेकै हो, धूवाँको सर्को। तर, सर्किएर झन्नै मरेको म त ! अहँ, निस्सासिएर आँखाभरी आँसु आएर निल्नै सकिनँ मैले धूवाँको परकिार। किलकिलेमुनि ठेल्नै सकिनँ रस, स्वाद र चुस्की। मुखभरी वरपर घुमाइरहँदा केको स्वाद, केको मस्ती र केको आनन्दी ! अनि पो म धूवाँ तान्नमा सधैँको गोल्टिङ। धूवाँ-मोह एक अर्थमा भएन। हो, हुँदै भएन। विश्वविद्यालयको विद्यार्थी छँदा बिहानकै कक्षा हुन्थ्यो तैपनि उति सारो धूवाँतिर मन गएन। अम्मली भइएन भनौँ न ! धूवाँप्रति आकर्षण भइरहेन मलाई। जाडोका दिनमा साथीहरूका ओठमा धूवाँले तुजुग देखाइरहन्थ्यो अटुट। म परेँ, कमजोर साक्षी। अझ विज्ञापनै भए पनि ‘यो त हानिकारक’। यस्तै चेतनाले चिमोट्न छाडेन मलाई। ठाउँठाउँका मुख, फोक्सो र छाती डढेका तस्बिर हेरेपछि मलाई चिसो पसेको लाग्थ्यो आफैमा ।
धूवाँको पिरोले मेरो शरीर पीडित मात्र भयो, उल्कापातको खुसीले रमाएन। हो, कहिल्यै उज्यालिएन। दुखाइ र व्यथाको भारीमा उज्यालिएको खुसीले केको पाइला बढाउँछ- लम्केर? घिसि्रन्छ मात्र पो त। घडी बिँडी, शिव बिँडीसँगै मेरा ठूलोबुबा चुर खानुहुन्थ्यो, सेतो ताउ पातामा। लाली र सुर्तीलाई मज्जाले मोरेर घाममा सुकाइन्थ्यो। अनि, त्यो मगमगिँदो चुरलाई ठूलीआमा-ठूलोबुबा दुवैले मकैको खोसेल्टा र सालका पातमा नि बेरेर सल्काउँथे। धेरै समय चुर, पात, खोसेल्टा, लाली र सुर्तीकै चर्चामा दिन बित्थ्यो। पिँढीमा देखिन्थ्यो ज्येष्ठ नागरकिको सभा, धूवाँमय। ‘सस्तो भनेको त क्यै नाइँ। जाबो धूवाँमा उड्ने कुरो नि यस्तो महँगो !’ सिमानाको बजार, नक्सलबारीमा किनमेल गरेर आएपछि ठूलोबुबा लालीको भाँडो थन्काउँदै भन्ने बोली म हरेक १५ दिनमा सुन्थेँ। ख्वाइँ-ख्वाइँ खोकिरहेकी ठूलीआमा भन्नुहन्थ्यो, ‘क्यैमा बढाउन नपाएपछि हाम्लाई नै त मार्न खोज्ने हुन् नि ठूलाठालूले !’ अनि, दुवै बूढाबूढी त्यही सेतो कागजी पातोमा चुर बेर्न थाल्थे। म त सानो केटो पढ्न भनेर छेउमा बसे पनि तिनका गलफती र गतिविधि हेररिहेकै हुन्थेँ। नाकमा एउटा अनौठो स्वादले बास गररिहेको हुन्थ्यो। सुकिलो र सुन्दर सेतो धूवाँ तान्ने आँट नगरे पनि चुरको बास्नाले तानिरहेको थियो। सुग्घर र स्वादिलो धूवाँको सर्को पिउने साहस नगरे पनि चुरको सुवासले अँगालिरहेको थियो मलाई। मगमग बास्ना। हो, एक खालको परिचित स्वाद। विज्ञान र प्रविधिमा धूवाँ अटुट जोडिने पक्ष हो। धेरै निर्माण र रचना धूवाँकै आधारबाट रचिएका लाग्छन्। लाग्छ, धूवाँले जन्मजात स्थापित अर्थ बोलेको छैन। नाशवान् र नष्ट कथाको गौरवमा धूवाँको मानक मूल्य जोडिएको छ। धूवाँले सिर्जनाको इतिहासमा डोर्‍याएको छ आफूलाई। यो सिद्धान्तका तर्कमा धूवाँले नजित्ला? यो सहरमा बस्न थालेको धेरै भयो। नगर र महानगरमा पाइला टेके पनि धूवाँबाट टाढा हुन सकिनँ म। धूवाँको मूल्यमा आज हरेक समाज र सभ्यता लागिपरेको छ एकोहोरो। धूवाँको विन्दु-विन्दु र थोपा-थोपालाई अँगाल्न जुर्मुराएको छ, आजको संसार।
धूवाँमा परेका तीनवटा दृश्य मेरा आँखामा जतिखेरै भतभती भएर आउँछन्। गाई दुहुन कसैले आँटै नगर्ने। अलिक परका नातेदार थिए काफ्ले। तिनको गाई थियो एकहाते। बर्खाताका एकपटक म पुगेँ पाहुना हुन। घर रुँगुवा हामी पर्‍यौँ। ‘तिमेरु अलिक अल्छी गर्छौ। धुनी लाएर मात्र गाई दुहुनु है !’ हुन्छ वा हुँदैन भनेनौँ हामीले। झिँगा र लामखुट्टेको डसाइमा आजित भएको गाईले आज नौलो अनुहार देख्नेबित्तिकै यसरी लात्ती बर्सायो, बाल्टी एकातिर त भयो नै, काफ्लेका कान्छा छोराको नि टाउको र आँखा नै थिलथिलो पार्‍यो। अहिलेसम्म गाईको लात्तीको निसानी छ, बाङ्गो आँखा र नाक छेउमा गहिरो खत। धूवाँको जोहो नहुँदाको एउटा स्तब्ध दृश्य। बुबा तीर्थ गर्न जानुभएको थियो। पूजा कोठामा मौरीका घार थिए। यस्तै तीन-चार घारले वसन्त ऋतु आएपिच्छे नयाँ घर बनाउन निहुँ खोजिरहेको छनक पाएकै थिएँ मैले। ‘आज मह काढ्नु-पर्छ। कोइला ठीक पार्नुपर्ला !’
मह काढ्न रहर गर्ने तिमिल्सिना मामालाई भनेँ। ‘धूवाँले हैरान पार्छ। म सजिलैसँग मह काढ्छु। तिमी किन अत्तालिएको?’ उनी चम्किए। राती भएपछि बिस्तारै मह काढ्ने काम भयो। कता के मिलेन, हरेक घार बिच्किएर तिमिल्सिनामाथि धुइरएि मौरीका बथान। उनी मह काढ्न सक्ने भएनन्। आँखा सुन्निएर, हात, पाखुरा र गर्धन सुन्नाएर निकै दिन थला परे। खुबै ज्वरो आयो उनलाई। बुबाले भर्भराउँदा कोइलामा धूप हाल्दै सुवासित धूवाँमुनिबाट मह काढ्दा मौरीसँग दुस्मनी हुँदैनथ्यो कहिल्यै। जतन, ख्याल र स्नेहले मह काढेको उल्लास छरिन्थ्यो । उफ, तिमिल्सिनाको भुक्क फुलेको अनुहार। धूवाँसँग नजिकिन नजान्दाको चोट। तेस्रो कुरा सम्झिरहेको छु म। धूवाँसँग अँगालिएको चिम्सा र चम्किला आँखाको संसार। मभित्र आइरहने एउटा चिसो र दर्फराउँदो कथा। घातक कथा, पराजित खुसी। हो, रुदिलो अनुहारमा खसेको मसिनो बादलको धर्सो। फुसको घर छ, परालले छाएको। सेउला र बाँसका झिक्राझिक्रीले बारएिको बार-टाटी छ। त्यसकै दक्षिणपट्टि परालको टौवा छ। त्यही टौवामुनि धिमालनी बूढी छन्, रक्सी पाररिहेकी। आगो अटुट छ, धूवाँले घेरएिको। बूढीले पेटानी कसेकी छन्। धूवाँमा छोपिएर रक्सी पाररिहेकी ती सेतै फुलेकी बूढी। तिनी त चाख्दाचाख्दै मातिसकेकी हुँदी हुन्। ठूल्ठूला तामाका भाँडा वरवर सार्दै दिन बित्छ तिनको। एकदमै बडेबडे भाँडामा पानी फेर्दाफेर्दै तिनको रात ओर्लिसकेको हुन्छ आँगनमा। जतिखेरै रसिला आँखामा उनी वरपर हेर्छिन्। दाउरा ठोसिरहेका हातले आँखा छामिरहेका हुन्छन्, कोस पुछिरहेका हुन्छन् र परेली मिलाइरहेका हुन्छन्। रक्सी बनिरहेको हुन्छ। उनको रक्सीले अरू धेरै भरे, भोलि वा पर्सि रुन सक्छन्, रुवाउन सक्छन्। यतिबेला उनी धूवाँमा डुबेर रक्सी बनाइरहेकी छन्। कुनै छुट्टी वा बिदा तिनको आँगनमा आएन। कुनै हिउँद वा बर्खा उनको पिँढीमा आएन। धूवाँले बिदा पाएन। धूवाँले छुटकारा पाएन। धिमालनीका वरपर थियो, धूवाँमय घडीपला। धूवाँले नाश गर्ने तथ्यसँगै एकदिन तिनी भेट्टइिन्, आँखा गुमाएर बाटामा माग्न बसेकी।
मैले धूवाँका यी पत्रे चोटमा आफूलाई धेरैपटक छामिरहेको छु। बिर्सिन नसकिने धूवाँखिलमा उभिन्छु म घरीघरी। धूवाँ तान्ने तरकिा आजको समाजमा अर्को सान भएर आएको छ। चुरोट वा गाँजालाई लिएर निकै बहस भइरहेकै छन्। उन्मत्त वा मनोद्वेगलाई सिर्जनातिर डोर्‍याउन धूवाँ छेउमा पुग्छु, यसो भन्नेहरूका ओठ र औँलामा चेपिएको चुरोट देखिरहेको छु धेरैपटक। त्यो उन्मत्त वा उदासीले किन धूवाँ वा फुसफुसे रूपको सहारा खोजेको होला? उदासी त चोट वा छातीमा गाँठो परेको कठोरतालाई तरल कुराले कसरी भगाउला त? धूवाँका हरेक लहरमा खिन्नता छ, व्यथा छ र रोग छ। जान्नेहरूका मन्थनमा यी तथ्य सरक्क पसेका छन्। बुझ्नेहरूले यी गुदी विचारका थोप्लाहरूले आफ्ना धमिलिएका आँखा धोएका छन्। अनि बाटो सोझ्याएका छन्, धुलाम्मे गोरेटालाई चिन्न र थाहा पाउन सकेका छन्। धूवाँ एउटा मौनता। धूवाँ एउटा विकराल। धूवाँ एउटा समाप्ति। धूवाँ एउटा कष्टसाध्य। धूवाँ एउटा समाधि। हरेक यी बुँदामा धूवाँले अधिकार खोज्दो रहेछ। न्याय र अधिकारका पानामा धूवाँले आफूलाई उभ्याउन खोज्छ। म भर्खरै त अरू भरङ्ग भएँ। मेरो घरमा भाङ तान्ने, सुल्फा अँट्ट्याउने, बिँडी बेर्ने वा तमाखु भर्ने रडाकाले ठाउँ पाएन। आमाले लुकेरै खानु भो। बुबाले हाम्रा अघिल्तिर झ्वासझ्वासी सलाई कोरेको थाहा छैन। बरू वरपरको समाजले घरीघरी त्यता तान्ने प्रयास भने गररिह्यो। विदेशबाट विद्यार्थीको ठूलो लर्को फिरेछ देश। तिनले आफन्त, नातेदार वा मित्रमण्डलीसँग भेटिरहेको सुनेथेँ। ‘हैन, सरसँग त बस्नैपर्छ नि !’ एकदिन थापाथलीनिर मेरो अघिपछि थियो त्यो हुल। अनि, थियो जोरजुलुमको आवाज पनि। ‘हुन्छ, बसौँ !’ विनीत भएँ म। मैले तिनलाई घोकाएको, सिकाएको वा पढाएकै थिएँ त्यत्ति नै। सधैँ विनीत बन्नु। विनयी वा विनम्रीले संसारका हरेकबाट प्रेम प्राप्त गर्छ। सिकेको ज्ञानमा हुन्छ ऊर्जा र जीवन।
‘चिया, खाजा क्यै होइन। सरसँगै हुक्का खाने !’ ‘हुन्छ, जाने, जाने !’ म सुनिरहेँ, खाने र जाने कुरा। एक सातापछि तिनले पाटन कृष्णमन्दिर उत्तरतिरको गल्लीमा छिराए। ढोकैमा लेखिएको थियो, हुक्का। सानो छाप्रोका दायाँबायाँ हुक्काको सुन्दर तस्बिर। म भित्र छिरेँ, हुक्का तान्ने लस्करको हुलमा। बिस्तारै अनेक बास्नाको लहर त्यहाँ छुट्यो। स्याउ, सुन्तला, अंगुर, आरु, मेवा वा अम्बाका बास्नाले घेरयिो, त्यो ठाउँ। जाई, पारजिात, तुलसी, करवीर, कदम र धतुरोको गन्धले भरभिराउ भयो- त्यो ठाउँ। एकपछि अर्को कुइरीमण्डल। अनुहार राताम्मे पारेर लट्ठ। ससाना केटाकेटीको मुखमा हुक्काको लस्कर। कुनै समय धूवाँको सर्कोले नीलो-कालो भएँथेँ म। कुनै बेला धूवाँको अटेसमटेसले आँखाभरी आँसुले पुरएिको थिएँ म। आज त्यो सब फिक्का। हुक्का तानिरहेका किशोरकिशोरीहरूका ओठमा पीडा, ग्लानि वा खुइय्य छैन। हुक्का खाइरहेका युवकयुवतीका अनुहारमा दिग्दारी, चोट वा पश्चात्ताप छैन। सुगन्धित बास्ना छ हुक्काको। मैले वरपर सबै हेरेँ, टेबलपिच्छे हुक्का तानेर निमग्न छ समाज। समाजका सबै खालको अनुहारले आनन्दित मौसम बोकेको छ। आवाजले भरएिर के भो ! पानीले चलायमान भएर के भो ! शब्द र स्वरको मिलापले के भो र ! अनुभूति र भाषाको साइनोले के भो र ! धूवाँ त हो नि हुक्का ! यसलाई जितिने तर्क हो मित्था। यसलाई हराउने विचार हो पुड्को। यसलाई पाखा लाउने धारणा हो लुलो । हुक्कालाई सक्तैनौँ हामी हराउन !
This entry was posted in Essays and tagged निबन्ध, हुक्का by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.